Jonga ukuba i-iPhone yakho isimahla
Ukuba ufuna yazi ukuba i-iPhone yakho ivuliwe, Apha sikunika inkonzo ukuba uyijonge ngesiqinisekiso esipheleleyo. Fumanisa ukuba ngaba I-iPhone isimahla okanye hayi ngendlela ekhuselekileyo.
Ukwazi imeko yokunxibelelana kwe-iPhone yethu okanye i-iPhone esifuna ukuyifumana kubalulekile ukuze sitshintshe inkampani yomnxeba kwixesha elizayo ngenjongo yokonga amatyala ethu, okanye ukungaguquguquki kokunganxibelelaniswa ngokusisigxina kwinkampani. Xa i-iPhone yamkela amakhadi kulo naluphi na uhlobo lwenkampani, yaziwa ngokuba yi-iPhone "yasimahla", oko kukuthi, sinokusebenzisa amakhadi e-SIM kuwo nawuphi na umsebenzisi ngaphandle kwalo naluphi na uthintelo kwaye ngendlela elula.
Uyazi njani ukuba i-iPhone isimahla
Ke ngoko, ukuba siza kufumana isixhobo sesibini se-iPhone, ngenxa yoko umthengi wexesha elizayo uyazi ukuba i-iPhone isimahla okanye idityaniswe nenkampani yemfonomfono, kuba kungenjalo, abayi kuba nakho ukuyisebenzisa eyahlukileyo. ikhadi lomsebenzisi kwinto edityaniswe ne-iPhone. Ke ngoko, inyathelo elibalulekileyo ngaphambi kokuthenga i-iPhone, kukuqinisekisa ukuba isimahla kwaye singayisebenzisa kunye nenkampani yeefowuni esiyifunayo. Ukwazi ukuba i-iPhone yakho ivuliwe, sikunika inkonzo elula nekhawulezayo, kuya kufuneka ufake idatha echaziweyo kule fomu, uya kufumana i-imeyile ngengxelo yedatha eceliweyo kwisithuba esimalunga nemizuzu elishumi elinesihlanu (kwezinye iimeko ezithile inokulibaziseka ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-6).